Testosterone ဟော်မုန်းဟာ nocturnal စိုက်ထူဖို့လိုအပ်ပေမယ့်နိုးထတာက dopamine ပေါ်မှာမူတည်တယ်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
nocturnal စိုက်ထူများအတွက်လိုအပ်သော testosterone, ဒါပေမယ့်စိုက်ထူ dopamine အပေါ်မူတည်နှိုး။
လေ့လာမှုများ၏အုပ်စုအနေဖြင့် အောက်တွင် ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်:
Nocturnal စိုက်ထူ testosterone ဟော်မုန်း-မှီခို (ကျောရိုးတုံ့ပြန်မှု) ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်နိုးစိုက်ထူအကြီးအကျယ် dopamine-မှီခို (ဦးနှောက်) ကြသည်။
အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူလူတို့အားပေးထားနောက်ဆက်တွဲ testosterone ဟော်မုန်း porn စောင့်ကြည့်သူနဲ့ဆက်စပ်နေ့ခင်းဘက်စိုက်ထူအပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
porn, ဒါမှမဟုတ်လိင်တံ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွစောင့်ကြည့်ခြင်းမှစိုက်ထူတစ် testosterone ဟော်မုန်း-လွတ်လပ်သောစနစ်ကပါဝငျသညျ။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ကဦးနှောက်နှင့်ဆုလာဘ် circuitry dopamine ပေါ်မူတည်သည်။
အဓိကအချက် - လူတစ်ယောက်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ညဥ့်နက်တဲ့စိုက်ထူမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ porn-သွေးဆောင် ED (ကြောင့်ရန် desensitization & ာင်း)
ကျွမ်းကျင်သူများကနံနက်သစ်သားသည်ညဥ့်နက်သည့်စိုက်ထူခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်း porn-induced ED ပါသောယောက်ျားများသည်နံနက်သစ်တောများကိုမပြုလုပ်ရ၊ ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရပါဘူး
မြင် အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား? နှင့် ED & Porn ဗီဒီယိုစီးရီး
J ကိုလိင် Med ။ 2005 နိုဝင်ဘာ;2(6): 771-84 ။
Montorsi က F, Oettel အမ်
istituto Scientifico အိပ်ချ်စန်း Rafael, မီလန်, အီတလီ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အိပ်စက်ခြင်း-related စိုက်ထူ senescence ဖို့ Intrauterine ဘဝကနေပေါ်ပေါက်သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ nocturnal စိုက်ထူ၏အဓိက function ကိုပြီးတော့တိုးမြှင့်တစ်ရှူးအောက်ဆီဂျင်မှဦးဆောင်သော corpora cavernosa ၏လုံလောက်သော engorgement ပေးကြောင်းခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်လိုဏ်ဂူ fibrosis, ဖြစ်ကောင်းအော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းမရှိဖြစ်သော Corporate venoocclusive ကမောက်ကမဖြစ်မှု, များအတွက် histopathological အခြေခံကာကွယ်တားဆီးဖို့အလှည့်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာအိပ်စက်ခြင်း-related စိုက်ထူတွင်းအာရုံကြောအတွင်းမှာ nitrergic အာရုံကြောအမျှင်များကနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်များလွှတ်ပေးရန်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အန်ဒရိုဂျင်ကဒီယန္တရားအဖြစ် corpora cavernosa အတွင်းနှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းအချို့သောအခြား Non-nitrergic ဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းညှိ။
ကအနည်းဆုံးအချို့ဒီဂရီအထိလည်းအန်ဒရိုဂျင်-အထိခိုက်မခံယန္တရားများကလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, နိုးနိုးကွားကွားထဲမှာခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု tactile သို့မဟုတ်အမြင်အာရုံဖို့ erectile တုံ့ပြန်မှုအများစုအနေနဲ့အန်ဒရိုဂျင်-လွတ်လပ်သောစနစ်အကပါဝင်ပတ်သက်။ ယုံမှားစရာမရှိ, အန်ဒရိုဂျင် key ကို nocturnal စိုက်ထူ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်များတွင်ကစားသမားများနှင့်ထိုကဲ့သို့သော transdermal ဂျယ်လ်အဖြစ်အသစ်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ testosterone ဟော်မုန်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများရရှိနိုင်မှုဖြစ်ကြပြီး intramuscularly အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ဒီလယ်ကိုအပေါ်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုံ့ဆျော။ အိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုလည်း hypogonadal ယောက်ျားအတွက်အိပ်စက်ခြင်း-related စိုက်ထူတိုးတက်စေရန်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့အန်ဒရိုဂျင်ကုထုံးအားဖြင့်တိုးတက်စေခြင်းငှါ၎င်းအလားအလာကိုထပ်မံအခြေခံသုတေသနနှင့်သင့်လျော်သောလက်တွေ့လေ့လာမှုများလိုအပ်ပါသည်။
nocturnal penile tumescence နှင့်ကျောမှုနှင့် hypogonadal အမျိုးသားများတွင်အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှ erectile တုံ့ပြန်မှုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏ဆိုးကျိုးများ။
Carani ကို C, Granata AR, Bancroft J ကို, Marrama P.
ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်, Modena, အီတလီ၏ဦးစီးဌာန။
Nocturnal penile tumescence (NPT) နှင့်အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု (VES) မှ erectile တုံ့ပြန်မှုကိုး hypogonadal ယောက်ျားအတွက်, တစ်ဦး Rigiscan device ကိုအားဖွငျ့, တိုင်းတာနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုး၏3လအကြာထပ်ခါတလဲလဲခဲ့ကြသည်။ တူညီသောအကဲဖြတ် 12 eugonadal ထိန်းချုပ်မှုအတွက်တခါထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျေနပ် NPT တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက်, လုံးပတ်တိုးနှင့်ကျောမှုနှစ်ဦးစလုံး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ထိန်းချုပ်မှုထက် hypogonadal ယောက်ျားအတွက်လျော့နည်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်သိသိသာသာအစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုအတည်ပြု, အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုးတိုးပွားလာခဲ့သည်။ လုံးပတ်တိုးလာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, VES မှ erectile တုံ့ပြန်မှု hypogonadal ယောက်ျားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူးနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုးအတူတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိပေ။ မာကျောမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, VES ဖို့ erectile တုံ့ပြန်မှု hypogonadal ယောက်ျားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားကွဲပြားဘူး။ သို့သော်ကြာချိန်နှင့်ကျောမှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုနှစ်ဦးစလုံး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, hypogonadal အမျိုးသားများတွင်အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုးအောက်ပါသိသိသာသာတိုးရှိ၏။ ဤရွေ့ကားအသစ်သောတွေ့ရှိချက်များ, ကျောမှုနှင့် ပတ်သက်. , အန်ဒရိုဂျင်လွတ်လပ်သောအဖြစ် VES မှအန်ဒရိုဂျင်မှီခိုနှင့် erectile တုံ့ပြန်မှုအဖြစ် NPT မြင်သောအစောပိုင်းကရေးဆွဲရေး၏ပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်။ NPT နှင့်အခြားအချိန်များတွင်ဖြစ်နိုင်သည်အလိုအလျောက်စိုက်ထူ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်အထိခိုက်မခံစနစ်ကပါဝငျသညျ။ VES မှ Erectile တုံ့ပြန်မှုအများစုအနေနဲ့အန်ဒရိုဂျင်လွတ်လပ်သောစနစ်အကပါဝင်ပတ်သက်ဒါပေမယ့်လည်းအန်ဒရိုဂျင်အထိခိုက်မခံယန္တရားများကလွှမ်းမိုးနိုင်ပါသည်။
ပြန်လည်စဉ်းစားယင်း reflexogenic psychogenic dichotomy အခြေအနေတွင်စိုက်ထူနေရာယူခြင်း။
neuroscience Biobehav ဗျာ 1995 နွေရာသီ; 19 (2): 211-24 ။
Sachs bd ။
စိတ်ပညာဌာန, Connecticut, စတောစျ 06269-1020, အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်။
Penile စိုက်ထူများသောအားဖြင့် "reflexogenic" သို့မဟုတ် "psychogenic" အကြောင်းတရားများမှပေါ်ပေါက်အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ လက်တွေ့တွင်ဒီခွဲစိတ်မှုသည်ကျောရိုး vs..
ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းများတွင်စိုက်ထူ၏ differential ကိုစည်းမျဉ်းများအတွက်အထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ကြောင်၏ဂန္လေ့လာမှုများနှင့်ကျောရိုးဒဏ်ရာရလူပုံအော psychogenic စိုက်ထူအတွက် hypogastric အာရုံကြောတစ်ဦးဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍ, ရသည်ဟုသုတေသန, အကြံပေးချက်များပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ အတန်ငယ်အားကောင်းကြွက်များတွင်ယောက်ျားသို့မဟုတ်သုတ်ရည်ထိအတွက်ဥပမာအမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု ((လူသားမြားသညျသို့မဟုတ်ကြွက်များတွင် Touch-နှိုးဆွစိုက်ထူအတွက်ဥပမာ nocturnal penile tumescence (NPT)) အချို့သောအခင်းအကျင်းထဲမှာစိုက်ထူသည်အခြားအခင်းအကျင်းအတွက်ထက်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ကိုပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ် ) ။ သို့သော်ဤကွဲပြားခြားနားမှုအချို့လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆွေမျိုး erectogenic အစွမ်းသတ္တိကိုကနေထက်ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်း၏အန်ဒရိုဂျင် sensitivity ကိုအတွက်အရည်အသွေးကွဲပြားမှုကနေပျေါပေါကျနိုငျသညျ။ ပိုများသောဆွဲဆောင်မှုစိုက်ထူအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကွဲလွဲစိုက်ထူ evoked သောအတွက်အခြေအနေတွင်ဓါတ်ခွဲခန်းအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကနေကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်ရပ်တစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်အထောက်အထား၏အလငျး၌ကသမားရိုးကျ reflexogenic-psychogenic dichotomy ကအနည်းဆုံးက၎င်း၏လက်ရှိပုံစံအတွက်ထိန်းသိမ်းထားသင့်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ တစ်ဦးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ပြုလုပ် reflex စိုက်ထူ somesthetic perineal ဆွဖို့ကန့်သတ်မရစေခြင်းငှါထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲကိုလည်း cranial အာရုံကြောကနေတစ်ဆင့်လက်ခံရရှိလှုံ့ဆော်မှုပါဝင်နိုင်သည်။ စံ reflexogenic-psychogenic dichotomy နှစ်ခုအခြားနည်းလမ်းအဆိုပြုထားကြပါတယ်။ အားနည်းသော, အသုံးအများဆုံး, အသိအမြင်အာရုံ, အာရုံ, ဒါမှမဟုတ် chemosensory ရှိမရှိဆို extrinsic nonsomesthetic ဆွကနေရရှိလာတဲ့စိုက်ထူ, ပါဝငျမညျ: ပထမဦးဆုံး psychogenic စိုက်ထူနှစ်ခုအာရုံပုံမှန်များမှာရသောအသေးစားတည်းဖြတ်မူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောနဲ့, reflex စိုက်ထူခြင်းနှင့် psychogenic စိုက်ထူအပြန်အလှန်သီးသန့်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ psychogenic စိုက်ထူ၏ခိုင်ခံ့သောအသိဉာဏျနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ကန့်သတ်ခံရလိမ့်မယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအာရုံထဲမှာ psychogenic စိုက်ထူ၏မူလပုံအလိုအလျောက်စိုက်ထူများအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါအရာ, သတိမှရရှိနိုင်မဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒုတိယကအခြားရွေးချယ်စရာ taxonomy ခုနှစ်, erectogenic လှုံ့ဆော်မှုအဆက်အသွယ် (somesthetic) သို့မဟုတ် noncontact အဖြစ်ခွဲခြားနေကြပြီး, စိုက်ထူ evoking ၎င်းတို့၏အရေးယူတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုစဉ်ဆက်အပေါ်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ Erectile အခင်းအကျင်းထို့နောက်အခြားနှစ်ဦးကိုရှုထောင့်မှ orthogonal အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်။ တောင်မှ taxonomy အတွက်အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ, erectile function ကိုသို့သုတေသနများ၏အပြုအမူများနှင့်အနက်အခင်းအကျင်းများနှင့်မျိုးစိတ်အကြားကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်တူညီရန်နှင့်စိုက်ထူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာ context-sensitive ကွဲပြားမှုပိုမိုနီးကပ်စွာအာရုံစူးစိုက်မှုကနေအကျိုးခံစားရဖို့မြျှောလငျ့ထားနိုင်ပါသည်။
တချို့လူတွေမှာနံနက်သစ်သားရှိတယ်၊ တချို့မှာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်က testosterone ဟော်မုန်းနည်းနေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေပြောသလိုကိုယ့် system ကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ငါ PMO ရပ်တန့်သောအခါ, အကြှနျုပျ၏နံနက်သစ်သားပြန်ရောက်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ မရငါအငယ်ပေမယ့်နေဆဲတော်တော်လေးကောင်းသောအခါကဘယ်လောက်မှ။ သင်ကပြန်ချင်လျှင်ဒါကြောင့် PMO ရပ်တန့်။ ငါကနိုးသောအခါငါပိုကောင်းအများကြီးခံစားခဲ့ရတချို့အကြောင်းပြချက်ငါ့အဘို့ငါသိ၏။ ပိုများသော virile နှင့်အသက်ရှင်လျှက်နှင့်အစွမ်းထက်။